Enweghị nchedo: Ndị APC na-akwa emo na PDP maka ijikọ aka na ndị na-eyi ọha egwu ma na-azọrọ na a na-enyochazi iji chọpụta ndị na-akwado ya
Onye isi ochichi All Progressives Congress APC ekpughewo nchọpụta dị elu na-aga n'ihu iji kpughee ndị na-akpata mgbasawanye nke iyi ọha egwu na mpụ ndị ọzọ na-eme ihe ike, na-ekwupụta olileanya na na njedebe nyocha ahụ, a gaghị achọpụta mmegide Peoples Democratic Party PDP. nye ego ikike ịgbagha ihe tupu ntuli aka elu nke 2023.
Ndị APC kwupụtara nke a na Sọnde na Abuja na nkwupụta nke Sen. John James Akpanudoedehe, odeakwụkwọ mba nke onye na-elekọta ya na Kọmitii Na-ahụ Maka Mgbakọ Na-ahụ Maka Mgbakọ CECPC wepụtara.
Ndị APC na-emeghachi omume na nkwupụta nke PDP na-esote ndị nnọchi anya mba ya na ngwụsị izu, nke kwuru na mba ahụ na-aga ngwa ngwa n'ọgba aghara nakwa na onye isi ala nke President Muhammadu Buhari enweghị ihe ngwọta ọ bụla n'ihi na ihe ndị a chọrọ karịrị ya. ochichi.
O kwuputara na ọ mara ọkwa nke ndị gọvanọ PDP na-ekwu maka nsogbu nchekwa na nso nso a na mpaghara ụfọdụ nke mba ahụ, na pati na gọọmentị na-ekerịta nchegbu nke ndị Naijiria nwere ezi obi, gụnyere ndị gọvanọ PDP.
Onye isi ala Buhari, dị ka otu onye na-achị achị si kwuo, ga-enweta ihe ngwọta dị mfe na ogologo oge maka enweghị nchebe.
Ọ sị, "Ka a na-ajụkwa ndị ọkwa dị elu ịmata ndị na-akwado ha na ndị mere ihe nchekwa ahụ, onyeisiala Buhari enyela iwu na-aga ndị ọrụ nchekwa anyị ka ha kwụsị ihe nchebe ahụ," ka o kwuru.
"Anyị na-atụ anya na ntị anaghị ekpughe izu ọjọọ nke ndị mmegide iji mee ka gọọmentị daa mbà iji kwalite agụụ ha na-atụ 2023."
N'aka nke ọzọ, ndị APC kwuru na ọ dịghị onye kwesịrị ịjụ ngwa ngwa ma ọ bụ ikike nke Onye isi ala Muhammadu Buhari iji kwụsị ihe nchebe ahụ mere n'oge na-adịbeghị anya.
“Anyị na-agba ndị metụtara ya ume, yana ndị niile nwere ezi ebumnuche ndị Naijiria, ka ha zere ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ime ka ọnọdụ nchekwa dị mfe. N'oge dị otu a, iguzosi ike n'ihe anyị nye mba anyị dị ka ezigbo mmadụ kwesịrị ibute ụzọ karịa njikọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
“Dị ka ndị na-anata mkparịta ụka nchedo mgbe niile, ndị Gọvanọ PDP kwesịrị ịghọta na asụsụ nkewa na-eme ka ndị mmejọ na-eme ihe ọjọọ a nwee obi ike. Nke a abụghị oge igwu egwu na gallery, kama ịnọdụ ala ma rụọ ọrụ eziokwu, ogologo oge. Nke a bụ ihe nlekọta nke Onye isi ala Muhammadu Buhari na-eme.
"E mesiri anyị obi ike na ndị gọvanọ anyị nke PDP, yana ndị niile metụtara ya, ga-arụkọ ọrụ ọnụ ma kwado ọrụ na-aga n'ihu iji mee ngwa ngwa na njedebe kpamkpam ihe nchekwa ahụ," APC kwukwara.
Arewa, Afenifere, PANDEF, Ohanaeze, na ndị ọzọ na-ewe iwe mgbe ndị isi ala kwusịrị na enwere nkata iji “kwatuo Buhari.” Nwere ike 6, 2021
Onye isi ala na-ekwu na e nwere ọtụtụ atụmatụ iji chụtuo Buhari Nwere ike 5, 2021
Onye guzobere Spotify na-ekwu na onye nwe Arsenal jụrụ onyinye ya ịzụta ụlọ ọrụ ahụ. Nwere ike 16, 2021
Ndị agha iyi egwu gburu mmadụ iri na abụọ na Yobe. April 25, 2021